IBlueConic: Qokelela, Hlanganisa, kwaye ulungiselele iTyelelo loMthengi | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 3, 2015 NgoLwesibini, Matshi 3, 2015 Douglas Karr
Ngoncedo lwedatha enkulu kunye neetekhnoloji zokusasaza, kukho uhlobo olutsha lwamaqonga ezentengiso abonelela ngendawo yokugcina izinto, ngexesha lokwenyani, apho unxibelelwano lwabasebenzisi lufakwe khona kwaye lungaxhunyiwe kwi-intanethi emva koko umyalezo wentengiso kunye nezenzo zisetyenziswa kubo. BlueConic yenye yeqonga elinje. Ibekwe kumaqonga akho akhoyo, iyaqokelela kwaye idibanise unxibelelwano lwabathengi kwaye emva koko ikuncede ngokuvelisa umyalezo wokuthengisa onentsingiselo.
Ukukwazi ukwenza ixesha lokwenyani kunye nokufaka amanqaku eenkcukacha ezininzi kunceda iinkampani ekukhokeleni ithemba labo okanye umthengi kuhambo lwabathengi ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Ngokujolisa kuhambo lwabathengi kunakwinkampani yakho, unokuba nefuthe elingcono kwizigqibo zokuthenga kwaye, ekugqibeleni, wandise ixabiso lokuphila kwabathengi bakho.
Iinkqubo ezimbini ezingundoqo zeBlueConic, iiProfayili eziqhubekayo kunye neeNgxoxo eziQhubekayo, zikwenza ukuba uhambise umsinga wonxibelelwano othatha incoko yabathengi ukusuka kwisitishi ukuya kwisitishi. Inkqubo ye- BlueConic iqonga liyasebenzisana nayo nayiphi na ingqokelela yetekhnoloji yentengiso; ithatha indlela eguqukayo nenenkqubela phambili kulawulo lwedatha; kwaye isebenza ngexesha lokwenyani, kwisikali.
Ukusuka kwiPhepha leMveliso yeBlueconic
Ukuqokelelwa kweDatha yomsebenzisi - Qokelela kwaye ugcine zombini idatha eqinisekisiweyo, enjengamagama kunye namaxabiso e-odolo yomndilili, kunye neenkcukacha zokuziphatha ezingaziwayo, ezinje ngonqakrazo kunye nefom. Zonke ezi zenzo zidityanisiwe kwiprofayile yomsebenzisi enye kwaye zihlaziywa ngentsebenzo nganye.
Umbutho wesazisi -Nxibelelanisa iiprofayili ezininzi kwaye uzidibanise zibe nye. Umbutho wesazisi usekwe ekuziphatheni komsebenzisi kunye nokuchonga okwahlukileyo, kwaye unokumiselwa ngamathuba. Yenziwe ngabathengisi, imigaqo iyadibanisa iiprofayili ezingafaniyo.
Ukuqonda okusebenzayo -Ingcaciso ivumela abathengisi ukuba baphonononge ukusebenzisana komsebenzisi kunye nokuguqula ukuqonda okusebenzayo kumathuba amatsha. Abathengisi ngoku banokufumana amacandelo amatsha, baqwalasele utshintsho kwindlela umsebenzisi aziphatha ngayo ngokuhamba kwexesha kwaye benze iideshibhodi ezinokuguquguquka ukuze zibeke esweni iingxoxo zesitayile esinqamlezayo ngexesha lokwenyani.
Icandelo leSmart -Ivumela abathengisi ukuba bahlukane ngamaqela abasebenzisi babodwa njengoko idatha engenayo ifakiwe. Isahlulo esibhabha senziwa senziwe sisebenzise iikhrayitheriya ezinje ngokusetyenziswa komxholo, amanqaku exesha lokuzibandakanya okwenyani, amaqondo okuguqula, ixesha lokunxibelelana, kunye nedatha yobuntu okanye idatha yengqondo.
Ngamaxesha onke kuLungiselelo -Ukuqhubeka nokwandiswa kokunxibelelana nabantu kuguquko, ukufumanisa imveliso, kunye / okanye ukubandakanyeka okukhulu. Imbali yokunxibelelana yomsebenzisi ngamnye iyafumaneka ukuze isebenze ngokukhawuleza, ikhuthaza iingcebiso kumaqela abasebenzisi kwicandelo elinye.
Ukungqinelana kwephulo -Gcina ukungaguquguquki kwamaphulo kunye nemiyalezo kulo lonke uhambo lwabathengi. Oku kuqhubeka kufuna iimpendulo zomkhankaso kwiindlela ezahlukeneyo zemiyalezo, njengewebhu, i-imeyile, ukubonisa, ukukhangela kunye nentlalo.
tags: Ukuqonda okunokwenzekastocksoloko usebenzaYiblueconicukungaguquguquki kwephuloizinqumoumbutho wesazisiiiprofayiliulwahlulo oluhleUkuqokelelwa kwedatha yomsebenzisi
Yintoni i-Intanethi yezinto? Kuthetha ntoni ukuThengisa?